Maryan Qaasim: wax la QARIYO QURUNAA ku jira! – Bashiir M. Xersi
Date: 21 Aug 2013Author: Bashiir M. Xersi 2 Comments
Kufsi, daba-gur, barya-xoog, xero-taraarax, ku dayid, tuugmo-tuluq IWM dhammaan waa erayo macno ka dhexeeyo ama is xiga, kuna kala duwan oo kaliya hab dhaqan bulshadeed deegaan ku saleysan. Waxayna isugu soo aruurayaan; haweeneey aan raalli ahayn ama ku qanacsaneyn in loo GALMOODO!
Dhaqan xumada Soomaaliya ka taagan, waa mid muddaba soo jiitamaysay, DIL, DHAC, BOOB, BILILIQO iyo XADGUDUB nooc walba leh ayaa ka jira, Soomaaliyana waxay calanka u siddaa xumaanta oo ay kaalinta koowaad kaga jirtaa, ilaa haddana dal ku haystaHORYAALKA XUMAANTA ma jiro.
Sanadkii hore tirada dumarka Caasimadda kaliya lagu kufsaday waxa ay gaarayeen 1700oo dumar ah. Waxaa walwalka sii kordhinaya waa in seddex meelood meel ka mid ah dadka la kufsaday ay yihiin carruur sida ay sheegtey hey’adda UNICEF ee carruurta u qaabilsan Q M.
Markii ay dhacdadaa foosha xun ka soo wareegtay in ka badan toddobo cisho, oo aan dawlad ku sheegga wax hadal ah ka dhihin ayaa kal fadhigoodii ma dhalayska iyo ma dhammaada aha ee lagu magacaabo mar walba “KAL FADHI AAN CAADI AHAYN!” loo saaray guddi soo baara. Weydiinta yaa ah, xay soo baarayaan? Ma in gabadha la kufsaday iyo in kale? Mise waxay soo baarayaan inay dambiilayaashii soo qabtaan? Hadday tan hore tahay, taa dhaqtarkii baaray ayaa noo caddeeyey, oo baaritaankooda looma baahna, haddayse tan dambe tahay, waxay ahayd inay sheekada dhan kale u dhigaan, oo ugu yaraan:INAY SOO QABANAYAAN EEDAYSANAYAASHA.
“kal fadhi aan caadi ahayn!” Waxay guddiga horjooge uga dhigeen Marwo MaryanQaasim, oo Wasaaradaha ay hayso ay ku jiraan midda Adeegga Bulshada, weydiinta ayaa ah; Guddiyadii hore loo magacaabay xuu uga duwanaan doonaa kani? Illeen waxaa jira waxaa jiro guddi u u xilsaaran arrimaha kufsiga, oo hadda ka hor la magacaabay, guddigii hore oo aan weli war iyo wacaal midna laga hayn ayaa mid kale laga daba magacaabay, [dawladda] laba waa fududdahay, balse, inta kale ee nolosha ku xeeran waa ku adagtay; 1-inay guddi magacaabaan. 2-Inay warqad saxiixaan!
Taa ku darsoo, dhowr bilood ka hor ayey ahayd markii malleeshiyo ka tirsan dowladda ee ku sugnaa waddada u dhaxaysa Afgooye iyoLambar Konton ay istaajiyeen gaari rakaab ah, ayna dadkii u kala saareen rag iyo dumar, dumarkii loo gartay in la kufsado ayaa waxaa ka mid ahayd gabar markaa xiligii Xaydka[Caadada] ku jirtay iyo kuwo Umula ah, iyagana Canjarafeyn iyo jukayn ayaa nafta looga qaadey, oo kuma baxsan inay laba xilli lama taabtaan ah ku jiraan. Caarku Idiin ma kaco idin Alle, inta aad dirqinaysaan dumar aan idin rabin, Aamiin iga daba dhaha, markan oo kale Ruuxaaniyaadka in la hoos galo ma ahane, itaal kale lama hayee.
Inta aan ku guda jiray diyaarinta qormada waa inta sida badan dhacdee, ayaan duljoogsaday hadal aan iga farxin, oo aan filo inuu dad badan caro galshay, oo ka soo yeeray Marwo Maryan Qaasin oo madax ka ah guddi loo magacaabay baaritaan lagu sameeyo kufsiga lagu hayo dumarka. Marwo Maryan ayaa Saxaafadda madaxa bannaan amar adag ku siisay inaysan marnaba wareysi ka soo qaadi karin dhibbanayaasha Malleeshiyada dawladda ama AMISOM kufsadaan, illeen inta kale meel loo raaco ayey leeyihiine, oo haddii la soo qabto waa dil sugayaale, kuwan kale horta yaaba soo qabanaya?.
Hadalkan oo ka dhigan in wixii hadda ka dambeeya Kufsigu yahay mid SHARCIYEYSAN, xaa yeelay, side uga suuragahsay iyada oo qof dumar ah inay sidaa uga hadasho arrin dhaqan, diin iyo aadaminimaba ku xun? Haddii qofka hadalkaa yiri NIN ahaa lahaa waxaan dhihi lahaa QOORA DHEERA waa sheekadii lagu yaqaannay, balse, adiga marna ma ka fishay qof dumar inay tiraahdo ha la qarsho kufsiga oo yaan la sheegin? Midda kale, in la sheegsheego waa midda kaliya ee la awoodo, maadaama aan Booliskii la isku aamini karin, oo dharkiisa maalin walba gabdhaha lagu kafsado, Maxkamaddii ay laaluush ku shaqayso, oo dambiilihi lagu sii daynayo meeqaad bixinee? Markaa sidee looga gaabsan karaa? Yaab.
Tan kale, in badan oo ku qaldantay SHUKADA Marwo Maryan Qaasin maanta ha arkaan, illeen Shuko [DHAR] wax ma asturtee qiimo iyo qaayo [DHAQAN IYO DHUR] ayaa wax asturee. Dhanka kale, nimankan NGOleeyda ah ha ka sugine inay Soomaali horumar gaarsiiyeen, sida idiin muuqata dib ayey ula hareen, illeen iyaga aqli aan ahayn: ANIGA XAA IIGU JIRA? MA LAHANE! Aan kuugu daree, saddax qoloaba Soomaali xalkeeda ha ka sugin, inaan loo dhoobinna danta umadda ku jirta, waxayna kala yihiin:
1- NGO-LEYDA: in badan oo ka mid inay Dawladdan Wasiirro ka yihiin waad ogtihiin, haddaba, saw lama dhihi karo, DAWLADDII NGO-LEYDA?.
2- MACALLIN: inta wadata Prof ama Dr ee lagu qasaaray ma filayo inaad u baahan tahay in laguu magacaabo.
3- WADAAD WAALLI DIIMEED WADDO: iyana xus iyo xasuusin uma baahna, oo wali ayey daboyaaqo yihiin.
Midda aan la yaabay baa ah, markii ay tiri Ciidanka wuxuu u taagan yahay difaaca dalka, waa dalkee dalkaa ma mid maankeeda ku yaalaa mise waa mid kale? Maanta dalka in la haysto waan wada ognehee, oo ay Xalane ka deggan yihiin, walba xay u dhihi waysay Difaaca dadka, markaa ayey qiil yeelan lahayde? Balse, sheekada Marwo Maryan ayaa u eg boor isku qairn, ka dib markii ay tiri arrinta kufsiga waa laga badbadshay. Halkan hoose ka dhagayso Maryan oo taa ka hadlee.
Run ahaan way jiraan qolo qaswadyaal ah oo arrintan si gurracn uga faa’iidaysanaya, balse, taa macnaheedu ma ahan in dhammaan dadka afka laga xiro, falka aamusinta saxaafadda xitaa Alshabaab iyo Qabqablayaashii sidan uma dhaqmi jirin, oo ka dhigan inay tan uga liitaa kooxihii maamulka magaaladaa uga horreeyey, dhanka ammaanka Xasan Sheeq ayaaba qiray in Alshabaab ku dhaanto, halkaa waa saddaxaa eber guushu u raacday Alshabaab.
Midda iga sii yaabisey ayaa ah inay tiri inaan la qaadi karin sawir ama muuqaal gabar la kufsaday, oo ka dhigan dhacdada yaan la diiwaangalin, illeen haddaan labadaa mid lahayn hadal qoraal ah adba dux u yeel, balse, marka sawir ama muuqaal ku horyaallo waad u jeedda in dhib ka muuqdo iyo in kale, gaar ahaan muuqaalka oo aanba marna shaki la galin karin. Waa hubaal in ujeedku yahay sidii loo cabburin lahaa saxaafadda Muqdisho oo iintooda badan la daalaca dhaca cabsi iyo dilal joogto ah iyo in xumaanta malleeshiyada dawladdu gaysato lagu qarinayo, Amisom iyadu waaba lama taabtaan.
Run ahaan arrintan soo laalaabadkeeda iyoxanuunka ku lammaansan waxaa iiga sii daran sida dadkeennu uga sii jeedo ama uga war la’ yahay. Waa maroo foolxumada dhacday iyo maqal xumadeeda oo aad la jiriricoonayso oogaduna ku dibaaxinayso. Waa marka labaade, xumaanta intaa la eg, oo bulshada dhexdeeda ka noqon karta dhaqan ama wax iska caadi ah, oo aan ahayn in lala yaabo, taaoo meesha ka saaraya yaxyax iyo sarriig oo dhan. Marka saddaxaad, waxay sii kobcinaysaatan aan u baxshay DHIMAALKA DHAQANKAsanadihii colaaddy Soomaaliya dul degtay, ee aadan marna arkayn oday la ixtiraamayo ama la cisaynayo, ee inta la afjigo loogu daro bahdil iyo magac xumo, sidoo kale, aysan marna ishaadu qabanayn dhallaan ama ilmo loo dhimrinayo damqasho iyo dareen naxariiseedna la galinayo, oo inta dabada haarati laga galsho lagu leeyahay waryaa bax! Marka afraad waa qabweynidii guud eeSoomaalida oo daaqadda ka sii baxaysa, si gaar ah dumarkii lagu yiqiinnay isla weynidaiyo afgaabnimada, illeen DAYUUS walba ayaa hadda damaacinayee. Midda shanaad waa inaybulshada ku bataan Ilmaha aan lahayn waalidka Aabbe [GARAC], illeen inta badan haddii gabadhu uur qaaddo ee ay dhashay canug aan Aabbe, [ISIR IYO EHEL LAHAYN]waa dhib inteeda la ege, taa oo qayb weyn ka noqon karta kala burbur ku dhici karaQAAB DHISMEEDKA BULSHADA.
Soomaalida, waxaaba iiga sii daran inay nagu wareersheen waxa ka dhacaya dalka Masar, gaar ahaan intooda ARAGTIDA IKHWAANKAaaminsan ama ARAGTI DIIMEEDKA maDHALAYSKA ah [DHACDAY] la hullaaban.
Malaha waxa ay uga gaabsadeen ayaa ah ingabadhii ay ciidamada dowladda kufsadeen oo la oran jirey Luul Cali, wariyihii arrintaa dabagalkeeda lahaa ee C/casiis Koronto xabsiga loo taxaabay, Maxkamadna ku xukuntay dhawr bilood oo xarig ah, oo ka dhigan ama afkaaga hayso ama xabsi iyo xarig suge ayaad tahay, ayna kuu dheer tahayGARSOORKA ILKA XANAF.
Previous Previous post: Yuusuf Garaad: Warramaa aan war hayn!
Next Next post: Xasan Shiiqoow: Xarun CAAFIMAAD iyo Xalqo CILMI haysku xaadirin!
2 thoughts on “Maryan Qaasim: wax la QARIYO QURUNAA ku jira!”